သင့် "Crush"ကို အချစ်ညွှတ်ကွင်းမှာကြွေကျလာအောင် လုပ်နိုင်မယ့်လှည့်ကွက် ၁၁ ခု
Home Lotaya သင့် “Crush” သင့်ကို အရူးအမူးချစ်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ့် လှည့်ကွက် ၁၁ ခု
သင့် “Crush” သင့်ကို အရူးအမူးချစ်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ့် လှည့်ကွက် ၁၁ ခု
အချစ်ဆိုတဲ့အရာအတွက် လူတိုင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေအတွက်တော့ အချစ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ချေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေး တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေကတော့ ကမ္ဘာမှာတစ်ကယ့်ကိုကံကောင်းတဲ့လူတွေပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေက ကိုယ့်ကိုပြန်မချစ်နိုင်မယ့် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သူ့ကို ချစ်နေမှန်းတောင်မသိတဲ့ လူတွေကို တိတ်တိတ်လေးမျှော်လင့်ရင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ရင်းချစ်မိသွားတတ်ကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့Crushလေးကို တစိမ့်စိမ့်နဲ့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်ငေးမောရင်း ကျေနပ်နေရတဲ့အချစ်မျိုးတွေပါပဲ။ ဒါဟာရူးသွပ်မှုတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကကိုယ့်ရင်ခုန်သံအတွက် တစ်ကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကို ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက် သူတို့ Crushနေတဲ့လူက သူတို့ကို သတိထားမိစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့သူတို့သင့်ကို အရူးအမူးချစ်မြတ်နိုးလာစေဖို့၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းတစ်ခုကိုစတင်ဖို့ ဘယ်လိုခြေလှမ်းလေးတွေနဲ့စတင်ရမလဲဆိုတာ မျှ၀ေပေးသွားပါမယ်နော်..ကဲအောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်.
ပထမဆုံးအနေနဲ့သင့်ကိုသင် မှန်ထဲမှာကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ အရဘ်အသွေးတွေကို သင့်ကိုသင်ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောပါ။ ပီးရင်သင့်မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်လိုက်ပါ။ သင်ပျော်ရွှင်မှုခံစားခဲ့ရတဲ့၊ သင့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာတွေကိုမြင်ယောင်ပါ။
သင်ဟာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ သင့်ကိုသင်တွေးမိပြီဆိုရင် သင့်မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်လိုက် ပါ။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရပြီဆိုသင့်Crushကို သင်ရင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
လေ့လာမှုတွေအရ မှန်ရှေ့မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စကားပြောခြင်းနည်းတွေက သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုတွေပိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေက တခြားလူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
သင့်ကိုယ်သင်ဂရုစိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ဆံပင်တွေကို သပ်ရပ်စွာဖြီးသင်ပါ။ မင်းရဲ့သွားတွေကို သန့်ရှင်းတောက်ပအောင်လုပ်ပါ။ မင်းမျက်နှာကိုကြည့်ကောင်းစေမယ့်အရာတွေအားလုံးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီးလုပ်ပါ။ ဒါဟာCrushအတွက်တင်မကပါဘူး။
မင်းနဲ့မင်းရဲ့ပတ်၀န်းကျင်က အရာတွေအားလုံးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကိုမင်းကြည့်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါ တခြားလူတွေကလည်း မင်းလိုပဲတွေးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သွင်ပြင်ကို အကောင်းဆုံးပေါ်လွင်စေမယ့်အ၀တ်အစားတွေကို၀တ်ပါ။
သင်နဲ့ပက်သက်ပြီးသင့်ကိုသင်အကြိုက်ဆုံး၊ အနှစ်သက်ဆုံးအရာကိုသတိပြုပါ။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင်များကို ပြနိုင်မယ့် အရောင်နဲ့စတိုင်ကို ၀တ်ဆင်ပါ။
သင့်Crushနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့ ညှို့အားပြင်း မျက်လုံးကို သူ့မျက်လုံးနဲ့ဆုံအောင်ကြည့်ပါ၊ ဒါပေမယ့် တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲဖျတ်ခနဲကြည့်တဲ့အကြည့်မျိုးဖြစ်ပါစေ။ သင်က ဿမန်အနေအထားပဲဖြစ်နေပါစေ။
ဒါကသင်ချစ်နေတဲ့သူကို သင့်ကို စိတ်၀င်စားလာအောင်အချက်ပြလိုက်တာပါပဲ။ ကံကောင်းလို့ သင်တို့ စကားပြောဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့ရင် သင်ကြိတ်ချစ်နေတဲ့သူရဲ့စိတ်၀င်စားမှုတွေကိုထောက်ခံကြောင်းပြပြီး ချီးမွမ်းမှုကိုပေးပါ။
သူပြောတဲ့စကားတွေကို စိတ်၀င်စားကြောင်းပြပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲ့ဒါကိုထောက်ခံတာပြပါ။ တူညီတဲ့စိတ်၀င်စားမှုနဲ့အကြိုက်တူတာတွေက ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှောင်ကြိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်တို့စကားပြောနေချိန်ပြုံးပါ။ ပြုံးခြင်းက သင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေပါတယ်။
သင်တိတ်တိတ်လေးကြွေနေခဲ့ရသူနဲ့ အတူတူရယ်မောပါ။ ဘ၀မှာ သိမ်မွေ့တဲ့ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကိုရှာဖွေတာဟာ လူတွေကိုပိုနီးကပ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာတွေ့တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းမပြောမိစေပါနဲ့။ ဒဏ်ရာတွေနဲ့လူကိုနလုံးသားအသစ်နဲ့ ဘယ်သူမှမချစ်ချင်ကြပါဘူး။ သူ့ရှေ့မှာ ကြေကွဲပြတာတွေဘာတွေမလုပ်မိပါစေနဲ့။ ဒါက သင်ဟာ အ တိတ်က ခုထိ မရုန်းထွက်နိုင်သေးတာကိုပြသလိုဖြစ်နေပြီး သင့်ကိုစိတ်ပျက်သွားစေပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ ကျဆင်းပြိုလဲလာဖို့ အဆင့်များစွာရှိပါတယ်။ စိတ်ရှည်ဖို့နဲ့သစ္စာရှိဖို့တေ့ာလိုအပ်ပါတယ်။ တချို့အရာတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့အချိန်ယူရပါတယ်
အသစ်အဆန်းတွေကို အတူတကွ တည်ဆောက်ကြခြင်းက ခိုင်မာတဲ့ နှောင်ကြိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းအတူကစားခြင်း၊ တကယ်ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလိုပြောဆိုပြုမူခြင်း၊ ကမ်းခြေမှာပျော်ပျော်ပါးပါး ရေကူးခြင်း၊ နေရာသစ်တစ်ခုကို ခရီးထွက်ခြင်း၊ လျောက်သွားခြင်းစတာမျိုးတွေနဲ့ သင်တို့ရဲ့အချိန်တွေကို အတူတူဖြုန်းပေးပါ။
သင့်အကြောင်း အသေးစိတ်တွေကို သူ့ကိုမပြောပြပါနဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေမလား? လူတိုင်းမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြတဲ့ လျို့၀ှက်ချက်တွေရှိကြမှာပါ။ ဒါတွေကို ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲသိမ်းထားပါ။ ထုတ်မပြောမိပါစေနဲ့။
ယောကျ်ားတော်တော်များများကခက်ခဲတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ သင်ကသူ့ကိုဘယ်လောက်Crushနေပါစေ၊ သူသင့်ကိုတန်ဖိုးလာအောင် သင်ဟာခက်ခဲတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာသိအောင်နေပေးပါ။ ဒါက အမြဲချေနေဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမဆိုတာ ဘယ်လောက်ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်သတ်နေပါစေ ပြန်ဖတ်တိုင်းအရသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲပေါ့။
သူနဲ့ပက်သက်တဲ့ အသေးအဖွဲအောင်မြင်မှုလေးတွေပြောပြရင်တောင် ၀မ်းသာပေးပါ။ သူ့အောင်မြင်မှုတွေကို ချီးကျူးပေးပါ..ဒါက သင်ဟာ သူ့အတွက်ရှိနေတယ်..သူ့ပျော်ရွှင်မှုက သင့်ပျော်ရွှင်မှုပဲဆိုတာပြသလိုက်တာပါပဲ။
ရင်းနှီးမှုတွေရလာပြီဆိုပေမယ့် သူလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းရှိနေပေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ သူနဲ့အချိန်တိုင်း သူလိုအပ်တိုင်း သင်ကရှိနေပေးရင် သင်တို့ကြားမှာ အမှတ်တရတွေကို လွမ်းမယ့်အချိန်၊ သတိရအောက်မေ့မယ့်အချိန်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ဒါကြောင့်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဘေးနားမှာနေချင်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် သူသိရနေစေဖို့ အချိန်တိုင်း သူလိုတိုင်း ရောက်ရောက်မသွားပေးပါနဲ့….သူ့ကိုသတိရဖို့အချိန်ပေးပါ.
လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို တစ်ကယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖို့ဆိုတာတစ်ကယ်တော့ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်း ဗျူဟာနဲ့ သင့်ကိုကြွေဆင်းလာအောင်လုပ်နိုင်မယ့်အချက်လေးတွေ အတိုင်းလုပ်ရင်တော့ သူသင့်ကို သေချာပေါက် ကြွေ ကျလာမှာပါ..သင့်အချစ်ကျော့ကွင်းမှာသူကျိန်းသေမိရမှာပေါ့..
Previous articleသင်ဘယ်လောက် စမတ်ကျကြောင်း ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း (၄)ခု
Next articleကလေးရဲ့အနာဂတ်ရှေ့ရေးကို ပျက်စီးယိုယွင်းသွားစေနိုင်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအမှားများ